နာမည်ကြီး Website များဖြစ်သော Google, Yahoo! Bing စသည့် Search Engine များမှတစ်ဆင့် Yellow Pages, Directory စသည့် Keyword တစ်ခုခုဖြင့် ရှာဖွေကြည့်ပါက www.myanmaryellowpages.biz သည် ထိပ်ဆုံးနေရာတွင် ရပ်တည်လျှက်ရှိပါသည်။ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ကုမ္ဗဏီများ၊ ဟိုတယ်များ၊ဆိုင်/ရုံးခန်းလိပ်စာ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် အခြား သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားပေးပါသည်။ မိမိ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို မည်သူမဆ်ို Myanmar Yellow Pages မှလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ထိုသို့လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် Myanmar Yellow Pages လမ်းညွှန်စာအုပ်၊အင်တာနက် နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများမှတဆင့် သန်းပေါင်းများစွာသော User များကရှာဖွေတွေ့ရှီနိုင်ပါသည်။ Google နှင့် Yahoo တွင်နံပါတ် ( ၁ )နေရာတွင်ရပ်တည်နေသော Myanmar Yellow Pages အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ၊ သုံးစွဲသူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော ပြီးပြည့်စုံသော ကုန်သွယ်ရေး ၊ စီးပွားရေး လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
BE FOUND WITH MYANMAR'S NO.(1) BUSINESS DIRECTORY
THE TOP POSITIONING WEBSITE (ထိပ်ဆုံး၌ရပ်တည်နေသော ၀က်ဆိုဒ်ဖြစ်ခြင်း)
နာမည်ကြီး Website များဖြစ်သော Google, Yahoo, Bing စသည့် Website များမှတဆင့် Myanmar Yellow Pages ကိုရှာဖွေကြည့်ပါက မိမိတို့ Website သည် ထိပ်ဆုံးနေရာတွင် ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။
ALL THE NFORMATION YOUR CUSTOMERS NEEDS(သင်၏ဖောက်သည်များအား လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း)
သင်၏ဖောက်သည်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၏ အဓီက လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ဆိုင်/ရုံးခန်းလိပ်စာ ၊ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ၊ Phone နံပါတ်များ ၊ ငွေပေးချေမှုစနစ်နှင့် အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
BUILD YOUR BRAND(သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုတည်ဆောက်ပေးခြင်း)
Online Advertising - Package Type
Basic 100,000 ks/year
Listing Description ~(Yes)
Image ~(5 Photo)
Special Offers ~(Yes)
Tag Keywords ~(Yes)
Business Hours ~(Yes)
Phone Number ~(Yes)
Email & Website ~(Yes)
Social Network ~(No)
HTML Editor ~(No)
Google Map ~(No)
Image ~(10 Photo)
Social Network ~(Yes)
Google Map ~(Yes)
Gold 300,000 ks/year
Image ~(20 Photo)
HTML Editor ~(Yes)